Tsena sosialim-bahoaka :: Iharan’ny hatezeran’ny mponina ireo sefo fokontany • AoRaha
Tsena sosialim-bahoaka Iharan’ny hatezeran’ny mponina ireo sefo fokontany
Tototry ny fanontanian-dava sy ny fanakianana avy amin’ireo mponina ny ankamaroan’ireo sefo fokontany eto an-drenivohitra, amin’izao fotoana izao, manoloana ny fitarazohana sy fikorontanan’ny fiasan’ilay tapakila 30 000 ariary hividianana entana ilaina andavanandro eny amin’ireo tsena sosialim-bahoaka. Velona ny ahiahy sao misy indray ny fanodinkodinana ny anjara fanampiana ho an’ireo olona marefo sy lasibatry ny krizy ara-pahasalamana, ankehitriny.
Misy hatrany ireo milaza ho tsy nahazo anjara tamin’ny tapakila, tato anatin’izay tapabolana nanombohan’ny fametrahana ny tsena sosialim-bahoaka izay, nefa sady tsy nisitraka tamin’ny Vatsy Tsinjo no tsy tao anaty lisitry ny Tosika Fameno ihany koa.
Mitovy avokoa anefa ny fanazavan’ireo sefo fokontany niresahana tamin’ny alalan’ny antso an-tariby, omaly, toy ny tetsy Tsiadana, Ambohipo, Ankaraobato, Andavamamba, Anosibe Andrefana. « Tsy izahay no miandraikitra ny Tsena sosialim-bahoaka fa ry zareo any amin’ny boriborintany. Tapakila efa misy anarana no voarainay avy any. Ny fizaràna Tosika Fameno sy ny fakàna tambavy CVO irery no nisoratana anarana tety amin’ny fokontany. Miteraka ady ny fizaràna an’ilay tapakila 30 000 ariary satria tsy mirindra ny fahatongavan’izany. Indraindray telo fotsiny, na folo, na dimy, no miaraka tonga ety amin’ny birao », hoy ry zareo.
Voatery mampiantso manokana an’ireo olona nahazo ny tapakila 30 000 ariary eny anivon’ny fokontany ireo tompon’andraikitra noho izao fahatarana izao. Folo hafatra ry zareo eo am-panomezana miaraka amin’ny hoe : « aza miteniteny amin’ny olona hoe efa nahazo ny fanomezana ianao sao hiteraka korontana izany ».
Nohazavain’ny governoran’ ny faritra Analamanga, Rasoamaromaka Hery kosa fa « misy foana ny fizaràna ny tapakila, isan’andro, mandra-pahavitan’ny isan’ny tokantrano tratrarina, izay dimy arivo sy efatra alina». « Ireo tsy nahazo Tosika Fameno sy Vatsy Tsinjo ihany no hisitraka ny fanampiana. Ny fahasarotan’ ny fanadihadiana no miteraka korontana kely amin’ny fizaràna azy », hoy izy.
Fahasahiranan’ny orinasa tsy miankina Olona iray hetsy nampiatoana tampoka tamin’ny asany